စိတ်ညစ်လို့ ရေကြောင်းခရီးသွားနေတယ်ဗျာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Local Guides » စိတ်ညစ်လို့ ရေကြောင်းခရီးသွားနေတယ်ဗျာ
Posted by အတိသဉ္ဖာ နာဂရချစ်သူ/ သန်းထွဋ်ဦး on Feb 13, 2012 in Local Guides, Photography, Travel | 16 comments
ကျွန်းတွေဆီကို ငပလီအလှ စိတ်ကြည်စရာ
လှေဦး ကနေပေါ့ ကမ်းခြေဆီသို့ 
ရေဆင်းငုပ်တဲ့ အဖော်လိုက်လာတဲ့ နိုင်ငံခြားသား
ချိုးချင်လိုက်တာ ဒါပေမဲ့ ရေအောက်က အကောင်တွေကြောက်တယ်
တော်ကြာ ကိုက်သွားရင် ဒုက္ခ
ဘယ်မှာလဲ ကိုနာဂ ပြောအုံး
ကို water melon ရေ ငပလီမှာတော့ ကြောက်စရာမလိုပါဘူး။စိတ်ဝင်စားရင် ငါးမျှားလိုက်ခဲ့လေ။
ကျနော်က ပျောက်သွားတာ မဟုတ်ပါဘူး။log out အလိုလိုဖြစ်သွားတယ်ဗျာ။ပြန်ဝင်လို့ မရတော့လို့ 
မနည်းကြိုးစားနေရတယ်။သူကြီးရေ ဘယ်လိုကြောင့် ခဏ ခဏ ဖြစ်နေတယ် မသိဘူးဗျ။အကိုရေ ငါး
တွေကတော့ သိပ်မရပါဘူး။အချိန်သိပ်မရလို့ ခဏဘဲနေခဲ့ရတယ်။
Very nice views, where is it?
ငပလီကို နှစ်ခါ ရောက်ဖူးတယ် … မြန်မာပြည်မှာတော့ အလှဆုံးကမ်းခြေတစ်ခုပဲ … ပင်လယ်ပြာပြာကြီးကိုလဲ သဘောကျတယ် …
ငပလီရောက်ရင် အကြာကြီးနေချင်ပေမယ့် တည်းခိုခ ဈေးကြီးလို့ ကြာကြာမနေနိုင်ဘူး … ခဏခဏသွားချင်တယ် ..
ငပလီ မှာ ရေငုတ်ပြီး ငါးတွေ ကြည့်လို့ ရမှန်း မသိဘူး။
ရရင် နောက်တခါ ရောက်ရင် ရေအောက်က အကောင်လေးတွေ ကြည့်ပါတယ်။
ငပလီကိုသိပ်သွားချင်တယ် အခုလိုသဘာဝအလှပုံလေးတွေတင်ပေးတာကျေးဇူးပါ အခုကများသောအားဖြင့် ချောင်းသာ ငွေဆောင်ပုံလောက်ပဲ ကြည့်ရတာ လူတွေကအဲကိုပဲသွားကြတယ်လေ ရန်ကုန်နဲ့နီးတာကို ကျွန်မကတော့ ငပလီကိုသိပ်သွားချင်တယ် ….အခုတော့ သွားချင်စိတ်ကိုပိုစေပါတယ်..
ငပလီကို အရမ်းရောက်ဖူးချင်တာ အခုထိကို မရောက်ဖူးသေးဘူးပဲ
ရေပြင်ပြာပြာကြီးကလဲ လှလိုက်တာ အရမ်းပဲ ….
ငပလီကိုတော့ တစ်ခါမှ မရောက်ဖူးသေးဘူး … ။
ငပလီရဲ့ ရေက အရမ်းလှတယ်လို့ပြောဖူးတယ် .. ဒါပေမယ့် … နိုင်ငံခြားသားတွေ အများစုလာပြီး … ကမ်းခြေက ဆိတ်ငြိမ်တယ် …. ။သဲကလည်း ပိုသန့်ပြီး ဖြူသတဲ့ ….. ။ ချောင်းသာတို့ …ငွေဆောင်တို့မှာလို … ရေထဲဆင်းဆော့တဲ့ လူ သိပ်မများပဲ … Stress တွေပြေလျှော့ဖို့ အတွက် နိုင်ငံခြားသားတွေ အသွားများတဲ့ ကမ်းခြေတစ်ခုပေါ့ … ။ ခက်တာက … ငပလီမှာ အစစ အရာရာ ချောင်းသာတို့ ၊ ငွေဆောင်တို့ထက် ဈေးကြီးတယ် … ။
ဟန်းနီးမွန်းခရီး ငပလီသွားလေ မမအိတုန်
ကိုသန်းထွဋ်ဦးရေ ကူညီပေးလိုက်ပါဦး အဲဒီရောက်ရင်
တကယ်လှတယ်ရေအရောင်က ကူးချင်လာပြီ ..
အဟီး ဟီး … မိုးဇက်ပြောမှပဲ .. ဟန်းနီးမွန်း ပလမ်ထဲ … ခရီးစဉ်တစ်ခု ထည့် စဉ်းစားရတော့မလိုပဲ … ။ wedding ကတောင် ဘယ်ဆီနေမှန်း မသိဘူး … ဟန်းနီးမွန်းသွားချင်တဲ့နေရာက ပြည်တွင်းပြည်ပ လေးငါးနေရာ …..
99 လောက်က ရောက်ခဲ့တယ်..
အိမ်ခါးပန်း ခေါင်းအုံးပြီး အိပ်နေကြတာ…အိမ်တိုင်းလိုလိုဘဲ..
ငပလီ က ရေပြာတယ်၊သဲဖြူတယ်..ရေထဲဆင်းလိုက်.လမ်းလျှောက်လိုက်..ဓါတ်ပုံရိုက်လိုက်
3 ရက်လောက်ကြာတော့ ပျင်းလာရော..ဒါပေမဲ့…ခုထပ်သွားချင်သေးတယ်…
ကရူးဆိုး လို သွားနေကြည့်ဗျာ ။
thet pying phyo ရေ ဒီပုံလေးတွေက ငပလီတ၀ိုက်က ကျွန်းလေးတွေနားမှာပါဗျ။
မမweiwei နဲ့ မမအိတုံရေ ငပလီက ဈေးတော့ကြီးပေမယ့် ခုတော့ပြောလောက်အောင်
မဟုတ်ရပါဘူးဗျာ။အသိမိတ်ဆွေရှိရင်တော့ ငွေကုန်သက်သာတာပေါ့။ကို MoeZ ရေ
မမနွယ်ပင်တို့ မမဆူးတို့ မမခိုင်ခိုင်တို့ ပါ လာလည်ကြပါ။တကယ်ရောက်ဖြစ်ရင် ခုထက်လှတာ
MaEi တို့ ကိုပေ တို့ ပါလာလည်ကြအုံးဗျာ။ကိုပေနဲ့ ကျနော် အတူတူ ကရူးဆိုးလုပ်ကြတာပေါ့။
မနေ့က ဒီ post အတွက် comment ရေးဖြစ်ပြီး..အိမ်မှာ ဓါတ်ပုံတွေပြန်ကြည့်မိတယ်..
အဲ့တုံးကတော့ ရှုခင်းလှလှတွေ့ရင် ဒီနေရာလေးနဲ့ရိုက်ပေးပါဆိုပြီး ၀င်ရပ်လိုက်တာဘဲ..
ရှုခင်းသက်သက်မရိုက်ထားမိဘူး..လူပုံမပါရင် တော်တော်လှမှာလို့ ခုမှတွေးမိတယ်..
ငပလီ ဟိုတယ်ရှေ့ ကမ်းခြေက လူတစ်ဖက်၊နှစ်ဖက် မကတဲ့ ပုန်းညက်ပင်ကြီးတွေ
ရှိသေးလားမသိ…ကျောက်မောင်နှမ ကမ်းခြေသဲပြင်ပေါ်က တီကျစ်စာလိုမျိုး သဲမှုန်ရွရွ
သဲပြင်မှာချိတ်အဆင်လို လိုင်းလေးတွေ ဖြစ်နေတာ..လွမ်းလိုက်တာကွယ်..
ငပလီဆိုလို့ အဲဒီနားက အပေါ်ရေကျွန်းခေါ် ပုလဲကျွန်းဆိုတာကော ရောက်ခဲ့လား။ လုံးသာ ဂျိတ်တောကနေ တစ်ဖက်ကမ်းကို ဖောင်နဲ့ကူးရတာလေ.. အဲမှာတော့ အတော့်ကို နေလို့ထိုင်လို့ကောင်းတယ်။ သတိရမိပါတယ်။ မဇင်လေဆိပ်ရယ် ရွှေဝါချိုင်ဟိုတယ်ဘက်တွေရယ်… လုံးသာရွာလေးရယ်… သောင်ပြင်တစ်လျှောက် ငါးကောက်ခဲ့တဲ့နေရာလေးတွေရယ်… ပြန်လွမ်းမိတယ်။ နောက် ကျောက်ပုစွန်ကြီးတွေလည်း လွမ်းတယ်။